Kabsado tirtiray ama formatted Faylal ay ka Maxtor Hard ah
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray ama formatted Faylal ay ka Maxtor Hard Drive
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray ama formatted Faylal ay ka Maxtor Hard Drive
Sidee inuu ka soo kabsado Data ka Maxtor Hard Drive
Sida badan oo kale drives adag, Maxtor drive adag waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in uu kaydiyo xogta baahsan. Waxaa ku jira dhammaan xogta aad u your computer, oo ay ku jiraan music, videos, document files, barnaamijyada iyo xitaa kulan. Si kastaba ha ahaatee, faylasha waxa ku jira weli lagu lumin karaa. Maxaa dhacaya haddii aad drive Maxtor adag uusan si fiican u shaqeeyaan? Maxaa dhacaya haddii aad la tirtiro files Maxtor si qalad ah? Maxaa dhacaya haddii virus weeraray drive ka Maxtor iyo dhammaan faylasha tageen?
Marka ay tani Maxtor arrinta khasaaro xogta soo food saartay, waxaad u malaynaysaa doonaa hab lagu dhammayn kabashada xogta Maxtor. Warka wanaagsani waa in aad qaban karto soo kabashada xogta Mextor drive adag la software-saddexaad sida Wondershare Data Recovery ama Data Recovery for Mac .
Barnaamijkan waxa software ka soo kabashada xogta Maxtor oo aad ku soo kabashada tirtiri karaa, formatted, iyo faylasha laga aad drive Maxtor adag.
Qabtaan Recovery File Maxtor in 4 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: The hawlaha soo socda waxaa lagu sameeyey oo la Mac version of Wondershare Data Recovery. Haddii aad isticmaalayso computer Windows, fadlan version Windows barnaamijka.
Tallaabada 1 Ku rakib oo ay maamulaan barnaamijka, waxaad u baahan doontaa 5 kabashada hababka uu ka soo xusho. Si loo isticmaalo caadi ah, "lumay Recovery File" waa doorasho wanaagsan. Waxaa qaataa dhowr daqiiqo inuu ka soo kabsado files leh hab this.
Tallaabada 2 Ka dib markii xulashada habka soo kabashada, waxaad arki doontaa interface ah. Halkan waxaa looga baahan yahay in aad dooratid in aad drive Maxtor adag si ay u bilaabaan baaritaan. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay sameeyaan sida edbinta kuu sheegayaa in la sameeyo.
Tallaabada 3 scan ka dib, ka helay files oo dhan la soo daabici doonaa by barnaamijkan. Tan iyo "lumay Recovery File" mode kabanayso files lumiyay magaca oo buuxa, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u baadhaan magaca file ee bar raadinta dusheeda ah.
Waxaad ku eegaan karo images caadi ah, dokumentiyo iyo gaaro si toos ah. Waxa kale oo aad eegi kartaa in files in aad doonayay ayaa la helay ama aan. Haddii files in aan la soo kabsaday, markaas ka dib waxaad isku dayi kartaa kabsaday xogta ka drive adag Maxtor leh ikhtiyaarka ah baaritaan qoto dheer.
Tallaabada 4 Hubinta kuwa aad rabto inuu ka soo kabsado, kaliya aad u baahan tahay si sax oo guji "Ladnaansho" inuu ka soo kabsado oo waxaan iyaga ku badbaadin on your Mac ama aaladaha kaydinta dibadda.
Fiiro gaar ah: Ha badbaadin files soo kabsaday in Maxtor adag la wado mar kale inta lagu guda jiro dib u soo kabashada, haddii kale faylasha lumay la overwritten laga yaabo oo aad aan marnaba awoodin inay iyaga soo ceshano noqon doonaa.
Tirtireyso Trash faaruqa ah: tirtireyso Trash madhiyey Mavericks
Sidee inuu ka soo kabsado Email tirtiray Files